Amaphepha eMonsanto: Isethulo sikaCarey Gillam kumakomidi ePhalamende laseYurophu
Iminyaka Eyishumi Yenkohliso: Isethulo sikaCarey Gillam ePhalamende LaseYurophu sokulalelwa kwe-glyphosate
Posted on October 12, 2017 by UGary Ruskin
UCarey Gillam uyintatheli ephenya futhi umbhali owine indondo ochithe iminyaka eyi-17 ekushayweni kokudla nezolimo kweReuters. UGillam manje usengumqondisi wezocwaningo weqembu lezintshisekelo zomphakathi i-US Right to Know. Lawa mazwi athulwe ngomhlaka 11, 2017 ngaphambi komhla ka- ukulalelwa komphakathi ngokuhlanganyela ku “The Monsanto Papers and Glyphosate” phambi kwamakomidi ePhalamende laseYurophu Wezemvelo, Impilo Yomphakathi kanye Nokuphepha Kokudla; Kwezolimo Nokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya
Izixhumanisi: amaslayidi nge SlideShare; KaCarey ukuphawula; ividiyo ka Isethulo sikaCarey futhi ukuzwa ngokugcwele
Iminyaka Eyishumi Yenkohliso: Ukuthi Ithonya Lenkampani Likusebenzise Kanjani Ukuhlolwa Kwezesayensi Nezokuphepha ku-Glyphosate
Izambulo ezivela kumaphepha eMonsanto nakolunye ucwaningo
Sawubona - Ngiyintatheli ephenyayo, umuntu ochithe iminyaka engama-30 egxila emaqinisweni, efuna iqiniso. Futhi njengoba ngichithe cishe iminyaka engama-20 kuleyo minyaka engama-30 ngicubungula ukusebenzelana kweMonsanto ngingakutshela ngokuqiniseka ukuthi indaba yamakhemikhali athengisa kakhulu enkampanini, i-glyphosate, ayiyona yeqiniso, kodwa ingeyokukhohlisa - inkohliso ebalwe ngokucophelela futhi ekhethiwe. Kunobufakazi obuqand 'ikhanda bemizamo yokukhohlisa, futhi ukwenza kanjalo ngezindlela ezisebenzisa abezindaba nokukhohlisa abenzi bezinqubomgomo abanjengawe.
Endimeni yami yokubika mina - kanye nozakwethu e I-US Ilungelo Lokwazi - bathole izinkulungwane zemibhalo kubaphathi bethu base-US nakwabasosayensi baseMelika abasebenza emanyuvesi kahulumeni, futhi le mibhalo ikhombisa ngokusobala umlando omude wokukhohlisa uma kukhulunywa ngokwethulwa kwezindaba ze-glyphosate. Ngaphezu kwaleyo mibhalo, manje sesinezinkulungwane zamakhasi we-imeyili yangaphakathi yeMonsanto, ama-memos neminye imibhalo eyenza kucace ngaphandle kokungabaza imizamo yale nkampani yokukhohlisa abenzi bomgomo kanye namalungu omphakathi.
Uzwile nje ukuthi ama-panelists akhuluma ngesayensi. Ngilapha ukuzohlanganyela nawe ukuthi imibhalo ikhombisa ini ngokukhohlisa. Siyazi ngemibhalo uMonsanto anayo:
Amaphepha ocwaningo abhalwe ngama-Ghost afakazela ukuphepha kwe-glyphosate ukuze kushicilelwe futhi kubuyekezwe umthetho
Kunikezwe ezinye izindlela zokuhlola ezibonisa ukulimala; abalawuli abaqinisekisiwe ukuthi banciphise ubufakazi bezinkinga zokuphepha
Kuthuthukiswe inethiwekhi yososayensi base-Europe nase-US ukusunduza umlayezo wokuphepha we-glyphosate kubalawuli nakubenzi bomthetho ngenkathi bebonakala bezimele embonini
Kusetshenziswe amaqembu obudlelwano bomphakathi ukubhala ama-athikili namabhulogi athunyelwe kusetshenziswa amagama ososayensi ababonakala bezimele
Kwakhiwa amaqembu angaphambili asebenzela ukwehlisa isithunzi izintatheli nososayensi abamemezela ukukhathazeka ngokuphepha
Kunikezwe "amaphuzu wokukhuluma" e-EPA angasetshenziswa uma ebuzwa ngabezindaba ngokuhlukaniswa kwe-IARC
Ucindezele ngempumelelo i-EPA ukususa i-epidemiologist ephezulu ezimele kwi-EPA Scientific Advisory Panel
Kubhaliswe izikhulu ze-EPA ezi-3 ukuvimba ukubuyekezwa kwe-Glyphosate ka-2015 yi-US Agency for Toxic Substances and Disease Registry uMonsanto athe angavumelana nayo ne-IARC
Umbhalo ogcwele we ukuphawula okuthunyelwe lapha (PDF). Ukuze uthole izibonelo eziningi zokukhohlisa kukaMonsanto okuvezwe kumadokhumenti, bheka amaslayidi kaCarey athunyelwe ngezansi - amaslayidi nawo ayatholakala nge PDF or SlideShare.
Xhumanisa ividiyo yokwethulwa kukaCarey Gillam nevidiyo ye ukuzwa ngokugcwele
UCarey Gillam uyintatheli engumakadebona, umcwaningi, nomlobi onolwazi olungaphezu kweminyaka engama-25 oluhlanganisa izinkampani zaseMelika, kanye no owayengumbhali omkhulu wenkonzo yezindaba zomhlaba wonke yakwaReuters. Incwadi yakhe entsha "I-Whitewash: Indaba Yombulali Wokhula, Umdlavuza Nenkohlakalo Yesayensi" isanda kukhishwa yi-Island Press. UCarey uphinde abe ngumqondisi wezocwaningo we Ilungelo Lethu Lase-US Lokwazi, inhlangano engenzi nzuzo ephenya ubungozi obuhambisana nohlelo lokudla lwenkampani, kanye nemikhuba kanye nomthelela wemboni yokudla kunqubomgomo yomphakathi.
Ukudla Okucatshangwayo, izibulala-zinambuzane I-ATSDR, UCarey Gillam, EPA, IPhalamende laseYurophu, glyphosate, IARC, Monsanto